China GREATPOOLl's Pool & SPA Product muRamada Group's Sanya Hotel fekitori nevagadziri | Dziva guru
GREATPOOL inopa dhizaini uye zvese zvekushandisa & zvekushandisa padziva rekushambira & inopisa chitubu SPAs yehotera yeRamada Group ichangovakwa muSanya City, Hainan Province, China.
Zvichienderana nezvinodiwa zvepurojekiti uye kutaurirana nemutengi, dhipatimendi rehunyanzvi reGREATPOOL rakagadzira dhizaini yeprojekiti ine runyorwa rwechigadzirwa, iyo inozivikanwa zvakanyanya nemutengi. Zvese midziyo & zvinhu, zvinosanganisira mapombi, mafirita, pasi pemvura IP68 LED mwenje, mhepo sosi yekupisa pombi, transformer, heat exchanger, control cabinet uye zvimwe zvigadzirwa, zvinopihwa neGREATPOOL, ine mhando yakavimbika, inozadzisa zvinodiwa neprojekiti.
Muchirongwa ichi, 9 seti dzeGREATPOOL's yakakwirira-inoshanda mhepo sosi yekupisa pombi inopa mvura inodziya kudziva rekushambira & inopisa chitubu SPA, iyo yakadzikira simba rekushandisa, yakawanda nharaunda ine hushamwari. Zvakare mapombi ekupisa akashongedzerwa neakavimbika uye nehungwaru kudzora sisitimu, mushandisi-inoshamwaridzika logic, iri nyore kushanda kana kuchengetedza, uye ine dzakasiyana siyana dziviriro dzakarongeka, ive nechokwadi chekushanda-kusanetseka uye kumhanya.
Iwo 9 seti mapombi ekupisa anosanganisira 4 seti yekupisa pombi ine simba rekudziya 19KW (yakayerwa ekuisa simba re4.5KW), 4 inoseta mapombi ekupisa ane huni hwekudziya hunosvika 26KW (yakayerwa kupinza simba re6.4KW) uye 1 seti yekupisa pombi ine kudziyisa kugona 104KW (yakayerwa simba rekupinza re26KW), zvese zvakatoiswa.
GREATPOOL, gara uchibata mhando yechigadzirwa sechinhu chekutanga, uye wagadzira kupisa kwepombi chigadzirwa chese chakatenderwa neEC, CB&ROHS nezvimwewo, kugadzira uye kutonga kwemhando kunoitwa zvinoenderana neISO9001 & ISO14001 chiyero. Kuvimbika uye kugadzikana ndiyo tag yezvigadzirwa zvedu, uye kuzvipira kwedu kune vese vatengi.
GREAPOOL, seimwe nyanzvi yekutuhwina dziva & SPA mupi wemidziyo, vakagadzirira kupa chigadzirwa & sevhisi yedu kwauri.
Nguva yekutumira: Jan-05-2022
Swimming Pool Project, Swimming Pool Service, Infinity Edge Swimming Pool, Swimming Pool Company, Public Swimming Pool Solution, Kunze Swimming Pool Solution,